ကုလားတွေ ဥာဏ်ဆင်နေပြီ... ~ Myanmar Express
From : ဆူးနှင်းမယ်၂၈.၆.၂၀၁၂ရက်နေ့ အီဂျစ်မှာ အီဂျစ်လူမျိုးအယောက် ၂၀ လောက်ကစပြီး မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်..ဆန္ဒပြရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလင်တွေကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများက နိုင့်ထက်စီးနင်း ဖိနှိပ်ပြီး ယခု အာရကန်နှင့် အရေးအခင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို တစ်ဖတ်သတ်ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ကဆိုပါတယ်။ အယောက် ၂၀ လောက်ကစလိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုဟာ အယောက် ၂၀၀ လောက်ထိတိုးပြီး အီဂျစ်ရဲများကပါ ထိမ်းသိမ်းခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြားသိရသလောက်ကတော့ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ဆန္ဒပြသူများဘက်မှ ခေါင်းဆောင်အချို့တို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးဘက်မှ အရေးအခင်းဖြစ်ပွားရခြင်းနဲ့ အခြေအနေတို့ကို ရှင်းပြသော်လည်း ဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်တို့က ထိုအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကို ၄င်းတို့သိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ထိုအဖြစ်အပျက်များနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အီဂျစ်ပြည်သူတို့ကို မြန်မာတို့က တောင်းပန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးမှ ထိုကိစ္စများအတွက် များစွာဝမ်းနည်းပါကြောင်း ပြောသော်လည်း ထိုလူတို့က လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် မြန်မာတို့မှ သတင်းစာများမှ တရားဝင် တိုင်းသိပြည်သိ တောင်းပန်မှသာ လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုသို့မတောင်းပန်လျင် တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှ လူများအား သံရုံးရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ....ဒါတွေကတော့ ယနေ့ကြားသိထားသမျှ အခြေအနေတွေပါ။ မနက်ဖြန် ဘုရားဝတ်ပြုပြီးချိန်တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှအပြန် ညနေ၅ နာရီမှာ ပြန်လည် ဆန္ဒပြကြဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်.။ ဒီနေ့ ကိစ္စဖြစ်ပွားအပြီးမှာတော့ ကျမတတ်နိုင်သလောက် သဲလွန်စရှာဖွေကြည့်မိတဲ့အခါမှာ အီဂျစ်တွေရဲ့ ဂရုတစ်ခုကနေ ဒီလို ၀ါဒဖြန့်တာကို အီဂျစ်ပေါင်းများစွာက ပြန်ရှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကလဲ အာရဗီစာ၊ စကားမတတ်တဲ့အခါကျတော့ ဂူးဂဲလ် အကူအညီနဲ့ပဲ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ခင်မင်တဲ့ အီဂျစ်တွေကတဆင့် ဆက်လက်စုံစမ်းပြီး သတင်းရသလောက် ဖြန့်ပေးပါမယ်.။ တကယ်တော့ ဒီနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ ကျမတို့အာရှတိုက်သားလူနည်းစုတွေဟာ အမြဲသတိကြီးကြီးနဲ့နေကြရတာပါ.။ ဆန္ဒပြတဲ့ သံရုံးဘက်ကိုကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်သည့်တိုင်အောင်(သွားခဲ့ရင် အသက်ရှင်ဖို့ အာမခံချက်မရှိပါဘူး) ဘာပဲပြောပြော တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရေးပေးပါမယ်.။ ဒီကိစ္စဟာ ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မရိုးသားပါဘူး.။ တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်... ဘာလို့အီဂျစ်ကိုအရင် စတင်ပြန့်နှံ့စေသလဲဆိုရင် အီဂျစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံအခြေအနေအရ အီဂျစ်လူမျိုးတွေသွေးဆူနေတဲ့ အချိန်တစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအချို့ဟာ နိုင်ငံရေးအသုံးချသူအချို့ကြောင့် နေ့တွက်နဲ့ တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှာဆန္ဒပြနေသူတွေလဲ အဆင်သင့်ရှိနေတာက တကြောင်း၊ နောက်အီဂျစ်ဟာ လောလောလတ်လတ် မွတ်စလင်ဘရားသားဟုဒ်မှ သမတရာထူးရရှိထားတာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင်း အင်မတန် ဇာတ်လမ်းစလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကို အသုံးချသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား စော်ဘွားတိုင်းပြည်တွေကို ဒီလိုဆန္ဒပြဖို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အီဂျစ်မှာ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ တခြားအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေဆီက ထောက်ခံမှုရဖို့ မခက်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်လို့ ကျမတော့ မြင်ပါတယ်.။ အောင်မြင်ရင် မြန်မာပြည်အဖို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းဖိအားပေးတာမျိုးခံလာရနိုင်စရာရှိပါတယ်.။ ဒီကိစ္စကို အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးအလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..။Myanmar Express
Posted in: မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
30 June 2012 10:55
30 June 2012 11:10
မြန်မာပြည်က ဖိနှိပ်တယ် ဆိုလဲ မင်းတို့ နိုင်ငံ မင်းတို့ ပြန်ပီး သွားနေကြလေ.. ဘာကြောင့် ဖင်ပြဲအောင် လာအော်နေတာလဲ.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေကို အကြမ်းဖတ် သမား အစွန်းရောက် ရက်စက် သတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ လူမျိုးလို့ အသိအမှတ်ပြုထားတာ ဘယ်နိုင်ငံကို အကူညီတောင်းတောင်း အချည်းနှီးပဲ.. အီရတ် ကို ပြန်ကြတော့လေ.....
30 June 2012 13:26
စောက်ကုလားတွေ ခွေပါးဝနေကြ တယ်
30 June 2012 20:51
အိဂျစ်နဲ့ သံအဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက် ဘယ်ကုလားနဲ့မှ အဆက်. အသွယ် လုပ်စရာမဘိုဘူး။
1 July 2012 02:20
Aung San Su Kyi dare to speak to the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity forever. She should not meet any pro Rohingya people, Media, Governments, Parties, organizations. Real good Myanmar leader dare to speak the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity forever like 88 leader Ko Ko Gyi said . Aung San Su Kyi is not real leader like Ko Ko Gyi. Ko Ko Gyi is real Myanmar leader. All Rakhine people and all Myanmar people must protest Aung San Su Kyi about she don't speak to the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity. Don't need to afraid of Rohingyas , Myanmar Muslims , Bangladesh government , pro Rohingya countries , governments and organizations . Tell them that We Myanmar will send Rohingyas to your country happily with our ships if you support Rohingyas and accept Rohingyas . Rakhine people and Rakhine state and Myanmar people , Myanmar country are more important than Rohingyas , Myanmar Muslims and pro Rohingya countries , governments and organizations. She should not meet any pro Rohingya people, Media, Governments, Parties, organizations.
Proest Pro Rohongya Aung San Su Kyi , Media and Organizations WorldwideAll Rakhine people and Myanmar people must protest Aung San Su Kyi for Rohingya. Aung San Su Kyi will allow Rohingyas to get Rakhine state for their another muslim country . So protest Aung San Su Kyi for Rohingya and Rakhine state. Muslims and Rohingya from London, UK and USA and World bribealot of money to Anna Jones , BBC , UK government , UK Foreign Secretary William Hague , British Parliament , VOA , RFA , DVB , UN , UNHCR , INGO, Mr. Benedict Rogers , Chris Lewa because they support that Rakhine state is Rohingya state. So All Rakhine and Myanmar people from London, other cities in UK and USA , World and NLD and Myanmar Government protest Anna Jones , BBC to demand fire Anna Jones from BBC . Skame on you Anna Jones and BBC.All Rakhine and Myanmar ( Burmese ) people in Myanmar and World must protest in front of Aung San Su Kyi , UN in New York, USA , UNHCR, NGO, Pro Rohingya and Muslim Partys, The Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) , Burma Campaign UK, Pro Rohingya and Muslim Organizations , Pro Rohingya Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro Muslim country Embassies and Consulates , Pro Muslim Organizations in Myanmar ( Burma ) and world about Rohingya.Pro Rohingya Aung San Su Kyi , BBC , VOA , UNHCR , INGO and UN , and other pro Rohingya countries, Governments , Partys and Organization, current UK government , UK Foreign Secretary William Hague and British Parliament ,World Rohingya , Saudi Arabia Government , Other Muslim country governments , World Muslim Organizations , World Muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) , VOA , World media , UN and NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders and all Rakhine people and Myanmar people in the World protest them. Arrest and prison Pro Rohingya Myanmar Muslims in Myanmar . Arrest and prison also pro Rohingya Myanmar muslims in UN, UNHCR, INGO in Myanmar.
1 July 2012 07:40
ဟုတ်တယ် ကုလား နိုင်ငံတွေနဲ့ သံ အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်.. ကုလားတွေကို မလိုလားပါ..
၉၆၉ က အသုံးချဖို့ ကြိုးစားတာကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ငြင်းပယ်ရပါတဲ့ ဆိုတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အား အိုဘားမားမှ ကောဇောနီခင်းကာ အိမ်ဖြူတော်သို့ ဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံမှု မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ - ၁၈ ပုံ)
အမေရိကန် မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုး
From : ..voa
Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူဘောင် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို အမေရိကန် ကုန်သ...
ချယ်လ်ဆီးသို့ မော်ရင်ဟို ပြန်ရောက် လာချိန်တွင် ဦးစွာ ထွက်ခွာရမည့် သူမှာ လုဇ်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ
[image: Photo: ချယ်လ်ဆီးသို့ မော်ရင်ဟို ပြန်ရောက် လာချိန်တွင် ဦးစွာ ထွက်ခွာရမည့် သူမှာ လုဇ်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ Wednesday, May 22, 2013 ချယ်လ်ဆီး အသင်းကို ဟိုဆေ...
(၂၇) ကြိမ်မြောက် SEA Game အတွက် ဂုဏ်ပြုသီချင်း (ရုပ်/သံ)
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် (၂၇) ကြိမ်မြောက် SEA Games အကြို ဈေးရောင်း ပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကုို ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန် မြို့ရှိ ဂျွန်ဟော့ကင်း(John Hopkins) တက္ကသိုလ် တွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြား­­
[image: နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန် မြို့ရှိ ဂျွန်ဟော့ကင်း(John Hopkins) တက္ကသိုလ် တွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြား­­]
အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် အပြင်မှာ တကယ် ကျဆုံးမဆုံးတော့ မသိဘူး။ White House Down ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ဖွတ်ဖွတ်ကြေသွားတဲ့ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ...
LG စက္ကူဖုန်း (Paper touch)
LG Paper touch လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဖုန်းကတော့ LG ရဲ့  အနာဂတ်မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် ဖုန်းဒီဇိုင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မဝေးတော့ပါ ဘူး။ ခေါက်ချ...
မြန်မာ ပြည်သူများအတွက် သတင်းကောင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်လက်ရှိပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ဖယ်ရှားပေးဖို့ အချိန် တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆီနိတ်တာ မက်ကောနဲလ် ပြောကြား
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်လက်ရှိပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ဖယ်ရှားပေးဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆီနိတ်တာ မက်ကောနဲလ် ပြောကြား
ဝါရှင်တန်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဟာ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား သာမက လွှတ်ေ တာ် တာဝန်ရှိသူတွေ၊ စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါ ကျယ်...